Mpụta mbụ ke bauma China 2016 Onyeàmà Olee XCMG si "Invisible onye mmeri" na-arụ "na-echepụta" Chess - China Shanghai bilitere
Mpụta mbụ ke bauma China 2016 Onyeàmà Olee XCMG si "Invisible onye mmeri" na-arụ "na-echepụta" Chess
The bipụtara ụbọchị: Feb-03-2017 Gụọ nọmba: 241
Dị ka n'elu engineering ígwè omume, "bauma China" (International Trade Fair maka Construction Machinery, Building Ihe Machines, Mining Machines na Construction Vehicles) bụghị naanị na-egosi na ụwa na Chinese ahịa ngwaahịa nnyocha ma mepụtara dabeere na Chinese ahịa ahụmahụ ma na-agwa ndị n'ụwa na anyị na-inwe ọrụ ịkwa ga-eme n'ọdịnihu na nkà na ụzụ, amamihe na nchepụta. Na nke a arena ebe zuru ụwa ọnụ na-ewu ígwè Refeyim rivals na onye ọ bụla ọzọ, XCMG, dị ka onye ndú nke ọhụrụ ulo oru mmepe ntụziaka na na ọnọdụ na-niile gara aga fairs, na-enye ya nkwupụta chie - "nchepụta, ọgụgụ isi n'ichepụta maka unu". Iji mma akọwa isiokwu, ma e wezụga na-ahazi ịtụnanya isi etiti ụyọkọ show, XCMG nwekwara debuts ndị ezinụlọ isi akụkụ na mmiri - "adịghị ahụ anya mmeri" n'etiti ígwè akụrụngwa.
Ọgụgụ isi, ike na-azọpụta na arụmọrụ bụ engine isi akụkụ na mmiri nke XCMG ịmụta imebi elu ọgwụgwụ ụkpụrụ n'okpuru ọhụrụ nkịtị. "Construction ígwè ụlọ ọrụ nke China doziri 90% nke okwu. Ihe dị mkpa bụ ka o merie ikpeazụ 10%. Ọ bụ nnọọ dị ka arịgo ole na ole gara narị mita na Ugwu Everest. Ọ chọrọ ihe ike, ego, ihe amamihe na ndị ọzọ talent. "Dị ka" Ịgbago Ugwu Everest Theory "chọrọ site President & Secretary nke Party Committee Wang Min, XCMG amalitela dina" echepụta "cheesi maka isi akụkụ na mmiri na mbụ. N'etiti ha, XCMG Hydraulics Co., Ltd., a akụkụ & akụrụngwa enterprise ike na 1975, na-adabere na mba ndị ọzọ ihe karịrị afọ iri anọ ji ọrụ na-egwu Chess na-eme ka haịdrọlik ọcha nke XCMG chee nile China, ọbụna na-exported na batches na fọrọ nke nta karịa 20 mba na ebe dị otú ahụ dị ka Europe, America, Russia na Japan dabere na nyocha na mmepe nke elu-ọgwụgwụ ngwaahịa na-apụta site na ọgụgụ isi, ike ịzọpụta na arụmọrụ, na-enwu n'etiti isi okpokolo agba nke zuru ụwa ọnụ dị iche iche na-ewu ígwè, gburugburu ebe obibi idebe ígwè, Ngwuputa ígwè, ụgbọ mmiri na ngwá na ndị dị na n'ikpeazụ ịghọ "adịghị ahụ anya onye mmeri" na-eduga mmepe nke onwe isi akụkụ na akụrụngwa ụlọ ọrụ.
"Valvụ" ngwaahịa imebi site elu-ọgwụgwụ ngwaahịa ụkpụrụ na "nghọta"
Ka echiche nke "nwere ọgụgụ isi n'ichepụta" na-akpọte, akpaka na digital nwere ọgụgụ isi teknụzụ na-massively etinyere n'ichepụta ụlọ ọrụ, nke ọ bụghị nanị n'ihu emesi quality stableness nke ngwaahịa na mma ọrụ arụmọrụ ma na-emepe a ụzọ ọhụrụ maka ngwaahịa myirịta mkpochapu na ika uru mgbasa. Site sharply ịghọta ohere, isi akụkụ na mmiri nke XCMG anya ha nnyocha na mmepe na elu-ọgwụgwụ haịdrọlik mmewere n'ichepụta ubi. Ka XCMG enwetara abụọ European ụlọ ọrụ - AMCA si Netherlands na Ft si Germany, plus oruru nke European Research Center nke XCMG, a "ụwa ịhazi + n'adabereghị otutu" R & D ecosphere nke a full ezinụlọ haịdrọlik ọcha na-ewere udi.
Mgbe a dedusted maka 15 sekọnd ikuku ịsa, ị banye a nso-ụdị mgbe nile-okpomọkụ omumuihe. Ọ bụ ezie na Rolling nke igwe gosiri na ntị, anya gburugburu, na ọ bụghị ọtụtụ ọrụ nwere ike na-hụrụ, n'ihi na ọ na a na-nyere na ukwuu akpaka emeputa larịị. Elu nhazi akụrụngwa na-anọchi ọtụtụ nke pesonel. Ọtụtụ ọrụ na saịtị ma Polish ngwaahịa n'okpuru flashlights ma ọ bụ jide ule ngwá ọma "ịchọpụta" ngwaahịa dị ka dọkịta na ... All nke mberede, ọ na-ele ka ha na-agaghị n'ichepụta ulo oru na ngwaahịa ma atụ ihe sere. Nke a bụ haịdrọlik mmewere mmepụta akara nke XCMG Hydraulics Co., Ltd. iche iche haịdrọlik valves showcased na ndị ngosi amuru a mmepụta akara.
Iji nweta ihe niile na-gburugburu itunanya ke haịdrọlik ubi, na 2012, XCMG were na-eme na enwetara abụọ European ama haịdrọlik emepụta - Ft si Germany na AMACA si Netherlands; n'otu oge, XCMG nwekwara nyekwara 360 nde euro melite a European R & D center na Germany na-elekwasị anya na isi ihe na isi teknụzụ dị ka haịdrọlik valvụ, mgbapụta, moto na ọgụgụ isi na-achịkwa. N'okpuru a ike okirikiri nhọrọ ukwuu, XCMG Hydraulics kpụrụ a emechi ụwa-achikota, ibe jikọrọ na nkwanyerịta akwado imekọ ihe ọnụ mmekọrịta Ft si Germany, AMACA si Netherlands, European Research Institute na dị ka ọ dị ka na-akpa ike ọgụ ike emeri elu-ọgwụgwụ isi haịdrọlik akụkụ na mmiri. Na nke a ngosi, electric rotary fom valvụ bụ n'ihi enweta na a nnyocha na mmepe ecosphere.
Dị ka ahụmahụ engineer na European R & D Center, Doctor Fei Kaoyin, dozie swinging edinam nke cranes, sonyere "CES Optimization" Project nke akpan iji ka mma operability, ike na-azọpụta arụmọrụ ma stableness. Olee otú imelite fom edinam? Doctor Fei Kaoyin ozugbo haziri ọhụụ ogbako maka ọtụtụ ugboro. Iji maturely ịnọchi anya ẹdude haịdrọlik amaghị na electric akara amaghị, o kwuru fiercely na ndị ọrụ ibe ya. Na njedebe, e pụta uwa mbu ifịk echekwa ọrụ nke tinye n'ọrụ electric proportional enyemaka valvụ na-aghọta swinging edinam nke cranes. Nchụàjà electric rotary fom valvụ bụ ndị ọzọ mụ na ezigbo n'oge swinging ihe, nke ozokwa stably mma ọhụrụ itunanya ke ngwaahịa na teknụzụ nke XCMG.
Ndị dị otú ahụ a haziri ahazi nnyocha na mmepe idaha bụ nile dị iche iche na haịdrọlik valvụ ngwaahịa ezinụlọ nke XCMG. Na 8 ụbọchị, ise valves na-esichara, abụọ tent na-kpọkọtara na otu set na-anwalewo ... Nke a bụ ugbu a nnyocha na mmepe ike nke CES otu maka haịdrọlik valves nke XCMG. The oru ngo a edu European Research Center nke XCMG na a na-akwado XCMG Arọ Machinery, XCMG Hydraulics na XCMG Institute. Anọ arty achikota nnyocha na mmepe na-ghọtara na nke mbụ mere na haịdrọlik valves nke XCMG na-budata mma na ngwaahịa kwa, dị ka na-eri, arọ na omume oge, na arụmọrụ egosi, dị ka akara, ọgụgụ isi na ihe stableness. Na ụlọ ntu maka isi akụkụ na mmiri nke XCMG, iche iche na ngwaahịa invariably-agwa gị na haịdrọlik valves nke XCMG nke akarị na ha "ọgụgụ isi" na-a "ọhụrụ opi" na nke "zuru haịdrọlik usoro ngwọta na-eweta" bụ ike ịga zuru ụwa ọnụ, dị ka APVM kwajuru mwute multiple unit valvụ na ntuziaka mgbanwe valvụ nke na-mepụtara maka zuru ụwa ọnụ ma ama shop emepụta na-enwe ike iguzogide 250,000 mmetụta ule na 20,000 commutation ule, XSV kwajuru mwute multiple unit valvụ nke nsogbu na-free reversing mmetụta karịa 1,000,000 ugboro na European na nwere uche-arụpụtara-in-China APV multiple unit valvụ.
Mee "green ngafe" na "ike nche-kwa"
Equipment n'ichepụta bụ ihe ndabere nke mba mmepe nakwa dị ka ihe dị mkpa nkwa nke ulo oru update na nkà na ụzụ mma nke dị iche iche ọrụ. Na-adịbeghị anya, anyị ígwè n'ichepụta ụlọ ọrụ bilitere eti, ulo oru usoro e mgbe niile rụọ na zuo okè na nkà na ụzụ ọhụrụ e enwekwukwa Ichi. Otú ọ dị, na ensuing oriri ike na mmetọ ndị ọzọ na ndị ọzọ pụrụ iche. Karịsịa, adaption ka chọrọ nke gburugburu ebe obibi na ebe obibi na mmepe kwesịrị iwere echiche maka imewe na n'ichepụta nke isi okpokolo agba nke na-ewu ígwè, na ọ na-aga trendy nyochaa na ịzụlite na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi na ngwaahịa. N'ihi ya, ọ na-aghaghị itinye akụkụ na akụrụngwa teknụzụ ndị ọzọ na oru oma na ume-azọpụta. Dị ka a mbụ na klas ụlọ akụkụ na akụrụngwa enterprise, XCMG Hydraulics-agba mbọ ka ọsọ ọsọ ngwaahịa nnyocha na mmepe nzọụkwụ, itinye ìhè ibu teknụzụ iji mmelite nke haịdrọlik ọcha na-agbalịsi ike na-enye ndị ahịa ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma na ike na-azọpụta haịdrọlik usoro ngwọta na technology support .
"Dị ka ìhè-ibu mpi ngwaahịa anyị were ọtụtụ afọ ike, ọ na-agbụ ka n'ihu mbo mbuli n'ozuzu arụmọrụ mma nke ọku engines. N'ọdịnihu, anyị ga-ẹkedori ọgbọ nke atọ na nke anọ general ìhè ibu ngwaahịa ime ka ndị ọzọ ezigbo oriri ike arụmọrụ. "Nke a na ìhè ibu mpi ngwaahịa kwuru site Chief Designer Zhang Qingkou maka ngwaahịa nke XCMG Hydraulics bụ aluminum telescopic anwụrụ debuting a bauma ngosi. Ọ bụ na nke mbụ ahụ na China. Mgbe ndị dị otú ahụ na ngwaahịa a napụtara maka oge mbụ, ihe niile ahịa na-masịrị ìhè ibu technology na-enweghị isịneke nke na-eme ya ike ga-enwe site otu aka. High ike aluminum alloy na nakweere maka isi akụkụ nke ndị dị otú ahụ na ngwaahịa nke ibu bụ 2/3 nta karịa mgbe igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ. E wezụga, pụrụ iche n'elu nhazi technology na nkwado na-abara technology na-na-etinyere. N'ihi ya, ngwaahịa a na-nyere na elu na-eyi ihe onwunwe na elu ekweghị ekwe, ya mmasị loading ike na-akakwa mma, na ọrụ ndụ na-enwekwukwa. Ọzọkwa, ọ bụghị naanị na-ebelata ike oriri nke isi etiti ma na-amụ na-ọzọ mgbanwe, si otú kpamkpam ịkwụsị ọnọdụ ghar ebe anụ ụlọ ọkụ engines mkpa ịdabere na dị aluminum alloy ọjà.
Ngwa nke akụkụ na akụrụngwa ìhè ibu technology bụ oké egwu ike nche-arụmọrụ nke isi eku. Dị ka anyị maara, niile haịdrọlik cylinder ngwaahịa, dị ka dị iche iche cranes, loaders na mgbapụta gwongworo, bụ akwụkwọ ume-azọpụta ngwaahịa akpan iji na-arụpụtara dabeere na nketa nke gara aga nnyocha na n'ichepụta ahụmahụ na-ewu ụlọ ndị e ji mara nke isi eku. Site mgbe niile nwee ume Ọdịdị njikarịcha na analysis nke ìhè ibu ngwa, ụlọ ọrụ na-eji elu-ike akwụkwọ ihe dochie omenala cylinder ihe ka ha wee ngwaahịa nyere na ezi n'ibu oru na arụmọrụ. Ya mere, jiri ya tụnyere mgbe ngwaahịa, arọ nke a zuru cylinder bụ 20% obere ma ọ bụ n'elu. The ụlọ ọrụ na-eduga n'ọdịnihu development direction nke ìhè ibu ngwaahịa.
Ka ọ dịgodị, remanufacturing technology gosipụtawo na akụkụ na akụrụngwa ụlọ ndò bụkwa oké egwu-ewu "green ngafe", dị ka elu ike ọsọ oxy-manu na plasma electrolyte polishing. Right now, remanufacturing ụlọ ọrụ na-eji nwayọọ nwayọọ evolving n'ime ọhụrụ ọwa nke na-ewu ígwè ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ịgagharị na-agbalị ka mma dị ka otu n'ime isi teknụzụ nke ngalaba nke isi akụkụ na mmiri nke XCMG adopts ịzụlite fọdụrụ ụkpụrụ nke ngwaahịa ndị kasị ruo n'ókè. Iji n'ụzọ zuru ezu na-aghọta uru Olee banyere anyị taa nke na ngwaahịa, na ụlọ ọrụ guzobere n'ụzọ pụrụ iche a remanufacturing alaka-elekwasị anya na-eme nnyocha nke haịdrọlik cylinder remanufacturing na isi mmezi idozi teknụzụ na-etolite a remanufacturing azụmahịa etiti ma a technology nnyocha usoro. Na nza nke remanufacturing ike breakthroughs na nkwalite ngwa results, na-agwa na-emeri nke nnukwu-tonnage remanufacturing oru nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ ígwè na ụlọ ọrụ na rụzuru nke iwu maka mmezi nke American dị cylinders, ọ na-egosi n'ụzọ na post-ahịa aghọwo ọzọ azụmahịa itunanya ebili mgbe nke ụlọ ọrụ.
Lee arụmọrụ si "mgbawa", 8000 awa "kwụọ" ọrụ ndụ
Dị ka ewu na ígwè na-mgbe na ejikwara n'èzí na aka oké ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka ájá oké ifufe na mmiri mmiri, ọ na ndị ọzọ na-adabere na ntụkwasị obi nke na ngwaahịa. Ndị ọzọ okwu, n'agbanyeghị nke na-emekarị ulo oru teknụzụ na-emepe emepe ka, stableness na ntụkwasị obi nke ngwaahịa ga-enwe mgbe nile mbụ anyị echiche anyị kwesịrị rube isi. Nke a bụkwa nke mbụ isiokwu jikotara aka wee chere ihu ewu ígwè emepụta na ha na-akwado akụkụ suppliers. Dị ka ọlaedo ọkọlọtọ nke "elu technology, kwụọ" e nyere, XCMG nwekwara zụlitere mgbaru ọsọ nke retargeting na refocusing na isi isi teknụzụ na isi akụkụ na mmiri. Dị ka na-eduga haịdrọlik cylinder emeputa, XCMG Hydraulics osụk a na-eju afọ akwụkwọ a ọkọlọtọ na 8000 awa "kwụọ" arụmọrụ.
"Bang-" Mgbe egwupụta dapụrụ, onye na-ewu na saịtị na Pilbara ebe nke Australia e buzzing ọzọ. Na nke a na Ngwuputa ebe, nso ụwa na-ekpo ọkụ ma na akọrọ, na nke nke n'èzí okpomọkụ bụ mgbe elu karịa 37 Celsius, a ibu-nnukwu-tonnage excavator ka consecutively ekenịmde 8000 kpatara-free ọrụ maka 8000 awa. Ndị dị otú ahụ pụta bụ weere na ìhè nke haịdrọlik ngwaahịa nke XCMG maramara n'ime. "Nsogbu-free ọrụ oge nke haịdrọlik cylinders of China ọbụna nwere ike ghara ghọtara site ụfọdụ mba mbụ na klas na ngwaahịa. Parts na mmiri nke XCMG bụ 'bara nnukwu uru' anyị gwuru na China! "Speech nke a ngwá director nke Australian Ngwuputa ebe enyo ha tụkwasịrị haịdrọlik cylinder ngwaahịa nke XCMG. "Gem" ọ na-ekwu banyere bụ haịdrọlik cylinder nke excavator egosipụta na ụlọ ndò isi akụkụ na mmiri nke XCMG. N'ihi na a ogologo oge, n'ihi na nke elu nnyocha na mmepe isi ike na mgbagwoju anya nhazi Usoro, plus oghom arụ ọrụ na ọnọdụ nke isi etiti, excavator elu chọrọ maka cushioning na airtightness. Ya mere, ndị dị otú ahụ na ngwaahịa na-ahuta ka "okpueze" n'etiti haịdrọlik cylinders na onye ọ bụla update bụ n'okpuru Chakwasa ihie. Ọganihu cylinder nke ibu-nnukwu-tonnage egwupụta gosipụtawo oge a bụ anụ ụlọ kasị-tonnage excavator cylinder nnyocha ma arụpụtara site XCMG Hydraulics na echiche nke ẹdude technology ndabere na akụrụngwa ike. Dị ka ihe mba isi mpi ngwaahịa nke isi akụkụ na mmiri nke XCMG, ngwa nke a usoro nke ọhụrụ ihe, nkà na ụzụ ọhụrụ na usoro ndị ọhụrụ ọ bụghị nanị na etịbede site cylinder technology bottleneck nke ụlọ ibu-nnukwu-ọnụ ọgụgụ excavator ma-enweta nkwanye obosara otito nke isi etiti ọrụ n'ụlọ ma ọ bụ ná mba ọzọ. Ọ ọzọ na-enye ihe kasị mma nkọwa ngwaahịa echiche nke "elu uzu, kwụọ".
Ke adianade do, e nwekwara ụfọdụ iju-na-achọ "ígwè ngwaahịa" na ụlọ ndò nke na-enye ike nkwado na "echepụta" cheesi nke "adịghị ahụ anya onye mmeri": ọ ekewet atọ yiri-na-achọ cylinders, na, utu aha dị ka "triplet" , bụ a pụrụ iche atọ-cylinder zipụta ha n'usoro telescopic ngwaọrụ ahụ; dabeere na hoisting e ji mara nke multiple-ogbo telescopic jibs nke nnukwu ugboala-n'ịnyịnya kreenu, ngwaahịa, site atọ-cylinder overlapping pụrụ isi chọta, ọ bụghị nanị budata mma hoisting ike nke isi etiti kamakwa akpali Ọdịdị njikarịcha na technology update nke isi etiti nke lorry- n'ịnyịnya kreenu; ajụ onwe-kpochidoro, end-onwe-kpochidoro na dum na-usoro-onwe-kpochidoro cylinder mechara site 28 amaghị ndozi na ule n'ụzọ dị irè-egbo Chassis n'iru mkpa nke ewu ígwè, na-aghọta na nkà na ụzụ itunanya ke ọtụtụ akụkụ dị ka ule ziri ezi, omume ọsọ na ọrụ ndụ nke kpochidoro akụkụ ma jupụta na na ọdịiche dị n'etiti ndị dị otú ahụ ụlọ ọcha na dị ngwaahịa na ọrụ ndụ na ntụkwasị obi eme maka gara aga ọtụtụ afọ; dị iche iche na technical samples-egosi elu nhazi technology, ịgbado ọkụ technology na akụrụngwa technology-enye ike na-akwado stableness na ntụkwasị obi nke isi akụkụ na mmiri nke XCMG, nke na-enyere isi Usoro research iru n'ogo nke "kwụọ".
"Ọzọkwa inyocha haịdrọlik ubi na technology ọhụrụ, merie mba mpi elu ọrụ." Ọ bụ ezie na ukpụhọde oru ada site ọhụrụ nkịtị nke Chinese aku na uba ka na-aga n'ihu, isi akụkụ na mmiri nke XCMG onwem na "ike nkwado" emewo triggered na nchepụta laghachi ogologo oge gara aga . Dị ka onye ndú nke elu-ọgwụgwụ isi akụkụ na mmiri nke China, "adịghị ahụ anya onye mmeri" nke XCMG na-aghaghị iji "n'elu Ugwu Everest", merie a elu-ọgwụgwụ itunanya "nchepụta cheesi" na freshly-amalite site bauma China 2016 na ọganihu kwupụta ụwa si ebe a na palitere ike vitality nke "Mere na China"!